Muri mubasa Open Review pamusoro Bit kuburikidza Bit: Social Research muna Digital Age. Munguva Open Review unogona kuverenga bhuku uye kubatsira kuti nani. Unogona kupa mazano maererano gadzira annotations vachishandisa hypothes.is , isina bhuku Musumo hurongwa. Uyezve, Website vachange achiunganidza kwako zvakakwana inofambiswa kuburikidza club ari readership uye kusiyiwa yevanhu chikamu chimwe nechimwe chebhuku.
Open Review kuchaitika apo iri bhuku racho muparidzi, Princeton University Press, ari kuitisa kufurirwa yokudzokorora. The inofambiswa kubva Open Review uye vezera yokudzokorora richashandiswa kusika yakadzokororwa yokuverenga. The Open Review nguva kuchaguma apo kwokupedzisira Shanduro pasi Princeton University Press, iyo pamwe muna November 2016.
FAQ pamusoro pachena ongororo
Rudzii inofambiswa Munotsvaka?
Open Review haisi pamusoro uchibata Typos. Asi, Open Review yakagadzirirwa kuunganidza marudzi ose inofambiswa, uye ndingada kunyanya kugamuchira chero inofambiswa kuti une pamusoro fuma bhuku. Pane zvikamu dzaunoona kunyanya dzinovhiringidza? Ko avo pfungwa chamunoona kukosha? Ndiri kuita zvinotaurwa kuti unofunga dzinoda yakanatswa? Pane zvikamu mubhuku kuti munofunga anofanira kubviswa? Kana mubvunzo, Ndinofunga kuti unofanira kutevera mumwe mukuru misimboti pana Wikipedia: Iva noushingi .
Ndinogona kuona annotations kuti vamwe vari kuita?
Chokwadi, vose annotations dziri pachena. Unogona kuona navo rworudyi rwechikepe peji imwe neimwe kana unogona kuverenga navo rukova chimiro .
Unofanira kuwana kuverenga mupumburu uye kubatsira kuti nani.
Zvinobatsirei kuti vanyori uye vaparidzi?
The Open Review muitiro zvichabatsira vose vanyori uye vaparidzi, kunyange kana vasina kufarira kuwedzera kuwana zivo. Masero kuchatungamirira dzakakwirira chinyorwa unhu kuburikidza yakajeka uye zvakazara dzinovaka. Uyezve, Open Review muitiro ichapa anokosha mashoko inogona kushandiswa munguva kumusika bhuku.
Chii vakai muitiro nokuda website iyi?
Tichaita zvizere Blog mumhanyi pamusoro mune ramangwana. Nokuti ikozvino, unogona kuverenga zvakawanda pamusoro bumbiro redu .
Pane nokusingaperi wakaita chinhu chakadai pamberi?
Ndine chokwadi kuti zvavanazvo. Heano mamwe fananei zvirongwa kuti ndanzwa nezvazvo:
Hadley Wickham sokuti kutanga mamwe mabhuku ake zvachose pachena, kunyange Handisati kumbomuona kunyora chinhu nezvazvo.
Lawrence Lessig kuti Code 2.0 rakanyorwa chikamu pamusoro wiki Vasai.
Rimwe bhuku chaizvoizvo akafuridzirwa ini kuedza izvi Michael Nielsen bhuku Reinventing Discovery . Zvino, zvinoita sokuti iye ari kuisa bhuku rake idzva iri kudzidza zvakadzama kuburikidza yakafanana kwacho.
Kathleen Fitzpatrick akaita chinhu chakafanana naye bhuku akaronga Obsolescence: Publishing, Technology, uye Nguva Yemberi Academy .
Kana pane dzimwe chokuita zvirongwa kuti ndava uchashaikwa, ndapota tizivise uye tichasvika kuwedzera kubatana. Kero yedu e ndiye info@bitbybitbook.com .
Rudzii mashoko Uri achiunganidza uye sei kuti mashoko kushandiswa?
Tapota verenga kwedu zvakavanzika uye mvumo itsika .
Ndingaita sei kudzidza zvakawanda pamusoro chinyakare kufurirwa muchidimbu mabhuku zvechikoro?
The AAUP achangobva kubudiswa mushumo yakanakisisa tsika nokuda kufanana yokudzokorora .
Ndinogona kuita izvi mubhuku rangu?
Sure. Ongorora chikamu bumbiro website iyi zvakawanda nezvokuti sei isu wakazviita.
Ndine mubvunzo zvakasiyana pamusoro Open Review. Ndingaita sei ndinotaura?
Tumira email kuna info@bitbybitbook.com .